Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidamada, loogana hadlay Doorashooyinka 2020, amniga iyo arrimo kale. | Somali National Television - sntv.so
Shirka Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidamada, loogana hadlay Doorashooyinka 2020, amniga iyo arrimo kale.
Muqdisho (SONNA):- Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Khayre, qeybiisa hore, halka uu qeybtiisa danbe uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Amniga Qaranka, Hindise sharciyeedyo, doorashooyinka 2020 iyo arrimo kale.
Previous articleBaydhabo : Ciidamada Amaanka oo gacanta ku dhigay dad amni darro abuuriyey
Next articleJowhar oo lagu qabtay Siminaar la xiriira baahinta nidaamka Dowladdaha hoose
Guddiga doorashada xubnaha Somaliland oo shaaciyey dib u dhac doorasho
Wasiirka Qorsheynta XFS oo kulan la yeeshay qaar kamida bulshada reer Garoowe “SAWIRRO”
Madaxweyne Deni oo qaabilay guddiga Kootada Haweenka ee Baarlamaanka Soomaaliya
Wasiirka Qorsheynta XFS oo kulan la yeeshay qaar kamida bulshada reer...